Tsy mora ny fitsaboana Mety miova endrika in-32 ny Coronavirus
Miisa 3107 ny fitiliana vita hatramin’izay. Tsy nisy ny tranga vaovao omaly, fa nisy kosa ny 8 sitrana,
ka niakatra 90 ny fitambaran’ny olona sitrana, ary 38 izany no mbola manaraka fitiliana, ka 128 ny fitambaran’izy rehetra. Tsy misy ny fahasarotana ilana fameloman’aina, ary tsy misy ny maty, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana. Na 38 aza ny marary tsaboina amin’izao, dia 497 ny fandriana vonona ho an’ireo marary ahiana na ireo mitondra ny tsimokaretina. Mbola miantrana sy vonona ny mpitsabo amin’ny ady atao amin’ny coronavirus. Tena mivarahontsana izao tontolo izao, tsy mitsahatra isan’andro mitafa amin’ireo namana aman-tsakaiza, mpitsabo, izay mahita sy miaina ny zava-misy any ivelany. An-tapitrisany no voa, an’hetsiny ny maty. 5 volana teo no nipoirany, ary ny toetrany dia tena mahavalalanina ny mpitsabo sy mpikaroka maneran-tany, hoy hatrany ny Pr Vololontiana. Tany amin’ny voalohany ny mampiavaka azy dia ny hoe mamindra izy, ary olona 2 na 3 eo no hamindran’ny iray, raha tsy misy ny sakana toy ny fikohafana fahatany, ny tsy fiarovana,… Mbola ao anatin’ny fikotrehana (periode d’incubation) izany hoe mbola tsy misy soritr’aretina dia efa mamindra, ary tena mifindra aloha be. In-droa na in-telo miova toetra isam-bolana ny voalazan’ny fikarohana tany am-boalohany, ary misy mpikaroka aza mahita fa in-32 miova, hoy ny Pr Vololontiana. Eo ihany koa ny fomba fitrangan’ilay aretina. Misy olona azo lazaina ho tsy marefo satria misy manao “forme grave”. Tsy ny taovam-pisefoana irery no hasiany fa taova maro. Rehefa tafiditra izy dia ny hatahorana hoe ny hery fiarovana dia mamaly bontana tsy araka ny tokony ho izy. Mamoaka kasinga be loatra ka ilay hery fiarovana indray no lasa mamono ilay olona. Mety lasa hisy vaingan-drà any amin’ny làlan-dra, hoy ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle.